Ladies kunye nenene, umnxeba wokugqibela kotywala! (kuveliswe) - Ukubala kwe-NYE ku-Djs, Vjs, ii-nightclub 2019
SKU: DJ DROPS 70 - #26 Udidi: DJ Drops
Ladies kunye nenene, umnxeba wokugqibela kotywala! (kuveliswa)
Ukuba awufumananga inani labo ... sicinga ntoni? Ayenzeki! (kuveliswa)
I-DJ Audio Drops
Ukufikelela kwi-30 Seconds yeskrimpthi ekhethiweyo kunye neengxolo kunye neziphumo! Zonke izandi zikhethiweyo kunye negama le-dj, inkampani okanye iqela ngaphakathi kwehla. Unyulo lwakho lwamaBhinqa okanye amazwi kaMale. Amerika, iBritish okanye iSpanish. Ukufezekisa ngokufaka uphawu lokuxuba amaxube kunye neekethi zeeklabhu! I-DJs yeselula ye-Wedding isebenzisa ezi zinto ukuze zenzele ukuphakama kwiigigs zazo ngokugqamisa amagama kaMtshakazi kunye noGrooms ngaphakathi kwomsindo. Yenza impembelelo enkulu!
Ingaba ndingamkela ingqalelo yakho nceda? Ukuba uFreddie Murphy usekwakha, nceda uze emnyango wangaphambili. Umkakho uyazi ukuba ulapha. Phinda, uFreddie Murphy umfazi wakho ulapha. Nceda uphume kwisakhiwo ... uyabhuqwa! (kuveliswa)
I-DJ yakho ibuyele. Ngoku siqhubeka kwakhona neqela lethu eliqhubekile. (kuveliswa)
Ukuba enye yezigqibo zakho Zonyaka omtsha ukusela utywala obuninzi ... umntu umemeza! (kuveliswa)